Moto E6: Nkọwapụta, ọnụahịa na mbupute gọọmentị | Gam akporosis
Izu ole na ole gara aga anyi nuru banyere Moto E6, ekwentị ọhụrụ nke Motorola ga-ebupụta na ntinye ya. Akụkụ nke ya nkọwa na ya imewe ha nọ na-ehi mmiri kemgbe izu. N'ikpeazụ, na enweghị ọkwa ọkwa, ụlọ ọrụ ahụ egosipụla ekwentị ahụ. Ya mere, anyị maara ihe niile banyere ya.
Moto E6 gosipụtara dị ka ekwentị dị mfe ma dị ọnụ ala karịa nke Motorola nwere na katalọgụ ya. Modeldị ntinye larịị, nke bụ isi na nkọwapụta mana nke ahụ na-eme nke ọma na arụmọrụ. Enweghị etu ọnụ, mana ịchọghịkwa ha.
Nhazi ahụ abụghị ihe ijuanya, ebe ọ bụ na Ọ bụ ihe anyị ahụla ọtụtụ na mpaghara dị ala na gam akporo. Akara a na-etinye aka na ihuenyo ebe a na-akpọpụta okpokoro agba dị elu na nke ala, nke pụtara na a naghị eji nha ya mee ihe kachasị na nke a. Na azụ otu ihe mmetụta na-echere anyị na nke a.
1 Nkọwapụta Moto E6
Nkọwapụta Moto E6
Ọnwụ izu ndị a emeela ka anyị marakwuo banyere nke a Moto E6. Ya mere, anyị nwere ike ịhụrịrị na ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị ekwentị dị mfe, yana nkọwa dị nro, mana ikwenye. Nhazi ahụ egosighi ihe ịtụnanya, ya na ahụ rọba, iji belata ọnụahịa. Ndị a bụ nkọwa nkọwa ya:
Ihuenyo: 5,5-anụ ọhịa Max Vision IPS LCD na HD + Mkpebi (1.440 x 720 pikselụ)
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 435
Nchekwa ime: 16 GB (nke microSD gbasaa ruo 256 GB)
Igwefoto azụ: 13MP
Igwefoto ihu: 5MP
Njikọ: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n; Dual Band (2.4 GHz; 5 GHz), Moto Ahụmahụ, 4G / LTE, GPS
Ekwentị dị ka a dị mfe nlereanya a nso. Dị ka ọ dị na mpaghara dị ala, Moto E6 nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa, yabụ ọ bụ oke nha na mpaghara ahịa a. Nakwa mkpebi ihuenyo nke ọ nwere n'ime ya. Maka nhazi ahụ, a na-eji Snapdragon 435, ihe nhazi nkịtị na mpaghara dị ala, nke dị n'ahịa ruo ọtụtụ afọ. Ọ na-abịa a 2/16 GB Ram na nchekwa Nchikota. Agbanyeghị na enwere ike ịgbasa nchekwa nchekwa na microSD ruo ikike 256 GB.
Ọ na-eji otu igwefoto azụn'amataghi 13 MP n'okwu a. A na-eji otu MP 5 eme ihe maka ihu. Ha abụọ dị mfe, mana opekata mpe anyị nwere kamera ma enwere ike iji ha were foto ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Batrị nke Moto E6 a nwere ikike nke 3.000 mAh, nke na-ahụ nkọwa ya, ga-enye anyị nnwere onwe dị mma n'oge niile. Na mgbakwunye, ọ bịaruteworị na ụdị nke gam akporo kachasị nso, ebe ọ na-eji gam akporo. Ebe ọ bụ na ọ dịlarị na-adịkarị na mpaghara dị ala, anyị enweghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ekwentị a. Dị ahụ hapụrụ ya, kama ọ na-eji mkpọchi ihu, ekele maka igwefoto ya n'ihu.
Maka ugbu a, ọ bụ naanị mwepụta nke Moto E6 ka ekwenyela na United States. N'okwu a, ndị isi ọrụ na mba ahụ kwalitere ngwaọrụ ahụ na ego nke $ 149,99, dika amara ya rue ugbu a. Ọ na-abata na otu ụdị ma wepụta ya naanị na agba ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ nke anyị hụrụ na foto niile nke ekwentị ahụ.
N'oge a anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara mmalite ya na Europe. Ya mere, anyị ga-echere maka ozi ndị ọzọ sitere na Motorola n'onwe ya na nke a. Eleghi anya n'ime izu ole na ole ekwentị ga-abụ nke a n'echiche ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Moto E6: orodị Motorola dị ọnụ ala
Nokia 8.2 nwere ike iweta igwefoto nwere ike ịgbanwegharị
E kpughere ọtụtụ nkọwa gọọmentị nke Vivo Z5: Snapdragon 712, batrị 4500 mAh na ndị ọzọ